I-River Cabinairhope. I-Kayaking.15mn-Dwntn Fhope - I-Airbnb
I-River Cabinairhope. I-Kayaking.15mn-Dwntn Fhope
Fairhope, Alabama, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Michael
Okukalwe kamuva nje ngokuthi "Enye Yezindlu Ezincane Ezipholile Zase-Alabamas" yi-AL.com. Futhi, ifakwe ku-Mobile Bay Monthly Magazine.
Ikhabethe lomfula elise-Fish River. I-Kayaking, imililo yasekamu, ukudoba!! Ngqo osebeni lomfula. Gulfshores, 38min, Downtown Fairhope, 18min.
Ukuhamba nge-kayaking, ukudoba, nemililo yasekamu, konke okujabulisayo! Izigxobo zokudoba, ama-kayak, amalahle nezinkuni, konke kuhlinzekiwe. I-Samsung smart TV enhle kakhulu. I-inthanethi esheshayo, ama-300mps.
3 umthamo womuntu
Lets vele ususe lokhu..ukuhlanzeka. Yilokhu okucabangela konke, ngesizathu esihle. Sinezinhlelo eziphakeme zokuthi sinikeze izivakashi zethu indawo yokuhlala ehlanzekile. Kanye nokugeza izinto ezivamile njengamashidi namathawula, sihlala sigeza okokumboza umbhede nezingubo zokulala kanye nezindawo zaphansi ezihlanzekile zesitimu nosofa. Siphinde sihlanze nge-sanitizer zonke izindawo izikhathi eziningana. Uma kwenzeka siseduze nomuntu ongazizwa kahle, sizodalula lokho ngaphambi kokuhlala kwakho. Bobabili abahlanzi bethu bahlonyisiwe.
Manje sekuphelile, u- uvumela u- akhulume ngezinto ezimnandi….
Enye yezinto zokuqala ozibonayo uma uqala ukungena emnyango iphunga elihle lamapulangwe. Uthola umqondo ohehayo. Ukuzizwa kwendlu eyakhiwe ngamapulangwe esemaphandleni, kodwa iye yalungiswa kabusha ngokuphelele. Ngemva kwalokho uyaphuma kwelinye lamafasitela angu-11 futhi ubona izinyoni ngamehlo omfula.
I-Bass-kin yindlu etholakala ngokuqondile emfuleni. Ibuye ibe sohlangothini lwe-Fairhope lomfula. Ukuba ohlangothini lwe-Fairhope lomfula kubalulekile ngoba iyindawo enhle kakhulu ukuba kuyo futhi iseduze nedolobha i-Fairhope. Le ndlu isanda kulungiswa.. Ifenisha entsha, i-TV, phansi, izinto zikagesi. Ingaphakathi elihehayo kakhulu namaphaneli amapulangwe, indawo yaphansi, nama-blind. Ukukhanya okuhle kwemvelo okunamafasitela angu-11 (nama-blind amapulangwe emvelo). Isitebhisi esiholela ekamelweni lesitayela se-loft esiphezulu sinombhede ogcwele onombono omuhle womfula. Uma ukhetha ukungasebenzisi ileli, usofa phansi esitezi esiyinhloko umbhede omkhulu.
Jabulela konke mayelana nendlu; ama-kayak, izigxobo zokudoba, indawo yepikiniki yokugaya inyama nge-Webber yamalahle grill, umgodi womlilo, njll. Umfula yindawo enhle yokuchitha isikhathi. Ngaphakathi kwendlu encane yokuhlala iyindawo enhle yokubuka imuvi noma umdlalo webhola. Ukunethezeka kakhulu phansi kosofa ogcwele. I-42 inch Smart TV. Sinikeza i-Youtube TV, okuyisevisi entsha(engcono) yokusakaza enikeza iziteshi ze-cable 70 ezihamba phambili, okulula ukuyisebenzisa. Ngokubuka amabhayisikobho, i-smart tv ikuvumela ukuba ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Netflix noma ye-Amazon Prime. Sine-inthanethi ye-Wifi enamandla amaningi (300mpbs!!). Insimbi yokosa inyama kaBig Daddy imbalwa nje phansi emgwaqweni. I-Big Daddys ingenye yezindawo zokudlela ezidume kakhulu zokudla isidlo sakusihlwa ezitholakala emfuleni(ama-crab claws amahle kakhulu).
Ingxenye enkulu yezindlu ze-Air BnB inabanikazi abahlala noma abaseduze nendlu. Asihlali noma aseduze nendlu eyakhiwe ngamapulangwe.
Isivakashi sakamuva sibone i-Bald Eagle endlini ngesikhathi sokuhlala kwaso!
(Ukudalulwa kwesithombe sendlu: ukuguguleka kolwandle kwenzeke ngenxa yeSiphepho u-Sally. )
4.98 · 176 okushiwo abanye
I-Keeney drive ingenye yezindawo ezingomakhelwane eFish River. Umgwaqo ongasekho, ngakho-ke akunazimoto eziningi. Enye yezindawo zokudlela ezidume kakhulu, iBig Daddys, ibanga lokuhamba ngezinyawo. Izinzipho zabo zenkalankala zinkulu. Kunepaki elincane nje emgwaqeni. Kuwuhambo oluncane oluhle oluya emfuleni..kwakukade kuyindawo lapho i-Fish River Ferry yakudala yayisebenza khona ngeminyaka yawo-1800s.
Njengasezindaweni eziningi ezingasemanzini eGulf Coast, ikhabethe lisondelene nomakhelwane nhlangothi zombili (bangomakhelwane abakhulu). Uma ufuna ikhabethe elikude ehlathini, lena kungenzeka kungabi yindawo yakho.
Ukuba umsingathi we-Air BnB kuyisifiso sami nomkami futhi kumnandi kakhulu.
Abahambi be-Air BnB bajabule kakhulu ukubhekana nabo. Ngicabanga ukuthi izizathu ziwukuthi abahambi be-BnB bahluke kancane..bacabanga ngaphandle kwebhokisi.. futhi bafuna okuthile okungaphezulu futhi okungavamile. Isivakashi ngasinye sihlukile ngendlela yaso.. futhi yilokho okwenza kube mnandi.
Abahambi be-Air BnB bajabule kakhulu ukubhekana nabo. Ngicabanga ukuthi izizathu ziwukuthi a…